ထပ်ဆောင်းကိရိယာ:ဘာသာစကားအလုံးစုံရွေးချယ်ရာ - MediaWiki
Description သုံးစွဲသူများကို ဘာသာစကားတစ်ခုရွေးချယ်ရန်နှင့် ၎င်း၏ထောက်ပံ့မှုကို လွယ်ကူစွာ ဖော်ထုတ်နိုင်စေသည့် ကိရိယာဖြစ်သည်။
Author(s) ဝီကီမီဒီယာ ဘာသာဗေဒ အသင်း
The Universal Language Selector isatool that allows users to selectalanguage and configure its support in an easy way. Where used, it also ships the functionality of both WebFonts and Narayam extensions (both of which have been deprecated in favour of Universal Language Selector). See ယူနီဗာရယ်ဘာသာစကားရွေးချယ်သူ for background and additional information.
Retrieved from "https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Extension:UniversalLanguageSelector/my&oldid=5307519"